Myanmar: Fihaonam-Bavaka sy Fanohanana avy amin’ny Firenena Manodidina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Septambra 2017 6:00 GMT
(Lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny septambra 2007 ahitana taratra ny hoe maninona no ianao izay heverina ho noporetina folo taona lasa izay no lasa manenjika ireo miozolomana lazainao ho tsy mpiray tanindrazana ao aminao ankehitriny)
Navoakan'ny Bilaogera Kambojiana Mean Lux ny sarin'ny fijoroana nataon-dry zareo teo anoloan'ny Ambasadin'i Myanmar ao Phnom Penh, Kambodza.
Nanetsika fanentanana akanjo mena ho an'i Burma ihany koa ny mpisera Facebook tamin'ny alakamisy alina ary nangataka tamin'ny mpisera Facebook hanao akanjo sy fehiloha mena sy ny zoma ho fanohanana ireo moanina ao Myanmar.
Nahoana i Sopheap no manao T-Shirt mena? (Beth Kanter)
Nanoratra ny firaisankinam-panoherana ao Kuala Lumpur, Malayzia i Elizabeth Wong, bilaogera Malayziana.
(sary avy amin'ny bilaogin'i Elizabeth Wong)
Birmana sy Malayziana 2000 eo ho eo no nanatevin-daharana ny firaisankinam-pihetsiketsehana ho fanohanana ny hetsika demaokratika ao Birmania sy ho fanoherana ny famonoana moanina, sivily ary mpanao gazety iray. Izany no fanetsehana haingana indrindra hatramin'izao, satria vao ny halina tamin'ny sivy ora monja no nanapahan'ny mpikarakara ny hevitra hanaovana izany.
Ao Singapaoro, theonlinecitizen namariparitra ny fihaonam-bavaka ao amin'ny tempoly birmana ao Singapaoro.
Ny servisy manokana dia ho fanomezam-boninahitra ireo maty nandritra ny fihetsiketseham-panoherana nandritra ny andro vitsivitsy.
Nisy mpianatra birmana iray efa manana diplaoma oniversitera nandika ho ahy andinintsoratra iray avy amin'ny vavaka: “Mivavaka izahay ho an'ireo nanome ny ainy ao Yangon, tamin'ny fihetsiketsehana vao haingana teo”.
theonlinecitizen niresaka tamin'ireo olompirenena Myanmar sasany tao amin'ny fihaonam-bavaka. Araka ny nolazain-dry zareo, manohana ny fihetsiketseham-panoherana ao Myanmar ry zareo:
Nilaza izy fa namelona fotsiny ny zavatra hafa izay efa nonkoninkononin'ny vahoaka birmana tany anatiny tany ny fiakaran'ny vidin-tsolika tamin'ny volana jolay. Ny fiakarana fotsiny no namelona azy, satria any anaty any misy ny antony lalina kokoa toy ny toe-piainana ao Myanmar. Ny iray hafa dia ilay fitondrana tsimifaditrovana.